ဂျပန်မိဘတွေက သူတို့ကလေးတွေကို အစားဇီဇာကြောင်သူမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုသင်ပေးသလဲ? - Chit MayMay
Home Child Nutrition ဂျပန်မိဘတွေက သူတို့ကလေးတွေကို အစားဇီဇာကြောင်သူမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုသင်ပေးသလဲ?
ဂျပန်မိဘတွေက သူတို့ကလေးတွေကို အစားဇီဇာကြောင်သူမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုသင်ပေးသလဲ?
ကလေးတွေကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစာကို စားစေဖို့၊ ဟင်းလျာတိုင်းကို ဇီဇာမကြောင်စေဖို့ ကြိုးစားရတာဟာ မိဘအများစုအတွက် ခေါင်းမာတဲ့ နွားပေါက်လေးကို ထိန်းကျောင်းရတာနဲ့ တူပါတယ်။ ကလေးတွေကို အစားအသောက်ကျွေးတဲ့အခါ ဟိုဟာမစား၊ ဒီဟာမစားနဲ့ အစားဂျီးများနေရင် မေမေတို့လည်း စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ အဲ့ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေကို အစားဇီဇာမကြောင်အောင် ဂျပန်မိဘတွေ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပေးသလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
၁။ သင့်ကလေးအား အရသာသစ်တစ်ခုကို ခံစားခွင့်၊ စမ်းသပ်ခွင့်ပြုပါ
ကလေးတွေဟာ တူညီတဲ့အစားအစာတွေကို ငြီးငွေ့လွယ်ပြီး အစာစားပုံ အလေ့အထတွေ မကြာခဏ ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ဟင်းလျအသစ်တွေကို မြည်းစမ်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဂျပန်မိဘအများစုက ဒါကို အလေးအနက်ထားကြပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အဆိုအရ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာမျိုးစုံကို တွေ့လေလေ သူတို့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ ပိုကျန်းမာတဲ့ အစားအစာတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားလာလေပါဘဲ။ ကလေးတစ်ယောက်အား မတူညီတဲ့ အစားအစာတွေကို နမူနာ စမ်းသပ်ခွင့်ပြုတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ အရသာဟာလည်း တိုးတတ်လာမှာဖြစ်ပြီး ဟင်းလျာအသစ်တွေကို မြည်းစမ်းချင်ကြပါလိမ့်မယ်။
၂။ အစားအစာခြင်းအပြုမှုမှာ အရမ်းပျော်ကြပါစေ
ကလေးငယ်တွေ အစားအစာကို သဘောမတွေ့လာတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲက တစ်ခုမှာ သူတို့ မကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကို ထပ်ခါထပ်ခါ စားခိုင်းတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးကို အခါအားလျော်စွာ စားချင့်စဖွယ်ဖြစ်အောင်ကျွေးပါ။ မိဘတွေအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစာစားခြင်းကို အရမ်းတင်းကျပ်တာမျိုး ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ ကလေးတွေက အရောင်တွေ၊ ပုံစံတွေကို အရမ်းနှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မေမေတို့အနေနဲ့ ကလေးရဲ့ အစာစားချိန်ကို စားချင့်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ၊ ပျော်စရာကောင်းအောင် လုပ်ပေးဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အသီးနဲ့အရွက်တွေကို ပုံဖော်ပြီးကျွေးတာမျိုးက စိတ်ဝင်စားမှုပိုဖြစ်စေပါတယ်။
၃။ ပန်းကန်သေးသေးနဲ့ ထည့်ကျွေးပါ
ပန်းကန်သေးသေးလေးတွေနဲ့ထည့်ပြီး ဘာ့ကြောင့်ကျွေးသင့်သလဲဆိုတဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းပြချက်က ရိုးရှင်းပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကြီးမားတဲ့ ပန်းကန်ပြားအရွယ်အစားနဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကို မခံစားသင့်ပါဘူး။ ပန်းကန်သေးသေးလေးတွေ သုံးတဲ့အခါ သူတို့စားချင်တဲ့အရာကို သူတို့ဘာသာ ရွေးချယ်ဖို့နှင့် သူတို့ဘာသာသူတို့ စားတတ်စေဖို့ အားပေးပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ “သာမန်အရွယ်”လို့ ယူဆတဲ့ အပိုင်းက ကလေးတစ်ယောက်အတွက် အရမ်းကြီးလွန်းနေနိုင်ပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ ကိုယ့် ကလေးစားနိုင်မယ့် အစာပမာဏကို တိုင်းတာတဲ့အခါ ဒါကို သတိရသင့်ပါတယ်။
၄။ မိသားစု ထမင်းဝိုင်းမှာ ကလေးတွေကို ပါဝင်စေပါ
ဂျပန်မိဘတွေက ကျန်းမာသော အစားအစာနဲ့ လူနေမူပုံစံရွေးချယ်မှုတွေကို ပံ့ပိုးပေးတဲ့ သီးသန့်အိမ်အငွေ့အသက်ကို ဖန်တီးကြပါတယ်။ မိသားစုနဲ့ အတူတကွ ပုံမှန်စားစေခြင်း၊ ကလေးတွေအား ချက်ပြုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပါဝင်ခွင့်ပေးခြင်းက သူတို့ဘာစားချင်လဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားကြောင်းပြဖို့ သူတို့ကို အားပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေးတွေအတွက် စံနမူအဖြစ် ပျော်ရွင်စရာ အစာစားခြင်းနဲ့ ကျန်းမာပြီး အရသာရှိသော ချက်ပြုတ်နည်းပုံစံတစ်ခု သတ်မှတ်ပါ။
၅။ ခုန်ပေါက်၊ ပြေးလွှားဆော့ကစားတာ များများလုပ်စေပါ
ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ မကြာခဏ စက်ဘီးစီးတာမျိုး (သို့) ခရီးတိုလေးဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ခရီးသွားပုံစံအဖြစ် သွက်သွက်လက်လက် လမ်းလျှောက်တာမျိုးကို ပိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ဂျပန်မိဘတွေက သူတို့ကလေးတွေကို ပြေးခြင်း၊ ခုန်ခြင်းကဲ့သို့သော ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ အားပေးပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့ အစာစားချင်စိတ်ကို အားပေးတဲ့အခါ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ အရေးကြီးပုံကို သိကြမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် မေမေတို့ကလေးတွေကို ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေနဲ့ နာရီပေါင်းများစွာ ကစားခွင့်ပေးမယ့်အစား အနီးအနားက ပန်းခြံမှာ အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ထွက်ခိုင်းတာမျိုး၊ အိမ်ထဲမှာ တူတူပုန်းတမ်း ကစားခိုင်းတာမျိုးက ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
Previous articleအသက် ၁နှစ်ကျော်ပြီးနောက် ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်း
Next articleမေမေတို့ မလုပ်မဖြစ် လိုက်လုပ်သင့်သော တန်ဖိုးရှိတဲ့ မိခင်တစ်ဦးရဲ့ အမူအကျင့် (၈) ချက်